नयाँ विकल्प | Weekly News of Nepal, Hot News, Weekly Paper
काठमाडौं । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा जिल्लावासी र पार्टीको सल्लाह अनुसार नै उनी पदबाट राजीनामा दिने मनःस्थितिमा पुगेका बुझिएको More »
कांग्रेसद्वारा उम्मेदवार छान्न सर्कुलर
काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरण निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कांग्रेस प्रदेशसभा तथा संघीय संसद्का लागि निर्वाचन रणनीति बनाउन जुटेको छ । कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार नामावली असोज १७ भित्र छनोट More »
नयाँ मुख्यसचिब बन्न दौड सुरु
काठमाडौं । सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको पदावधि सकिनै लाग्दा नयाँ मुख्यसचिव बन्न सरकारका वरिष्ठ सचिवहरू दौडधुपमा लाग्न थालेका छन् । मुख्यसचिव क्षत्री आगामी ७ कात्तिकमा ५८ वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउदैछन् More »
मधेशमा शक्तिशाली राजपा कि संघीय समाजवादी ?
काठमाडौं । असोज २ को अन्तिम स्थानीय चुनावले मधेशमा तराई मधेशका मुख्य दलमा अब राजपा र संघीय समाजवादी नै रहेको सन्देश स्थापित गरेको छ । यी दुई दलमध्ये पनि मूल रुपमा उदाउँदो More »
उम्मेदवार छान्न राजपालाई सकस
काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट गर्नेे विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टीभित्र तिव्र मतान्तर देखिएको छ । उम्मेदवार छान्नका लागि बनेको उच्चस्तरीय समितिले शनिबार पनि उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसकेपछि राजपाभित्रको किचलो More »
मधेशमा अनपेक्षित मत परिणाम नेतृत्वले होइन जनताले जोगाए कांग्रेस
September 24, 2017 मुख्य समाचार
काठमाडौँ । राजनीतिको निकै उतार चढावपछि बहुप्रतिक्षित प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतपरिणाम आउने अन्तिम चरणमा छ । मधेशको मत परिणामले एउटा सन्देश दिएको छ । स्थानीय तहका लागि तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको भोलिपल्टै परेको संविधान दिवस तीन प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका लागि निकै सुखद् हुनपुग्यो ।... [ Read more → ]
काठमाडौं । असोज २ को अन्तिम स्थानीय चुनावले मधेशमा तराई मधेशका मुख्य दलमा अब राजपा र संघीय समाजवादी नै रहेको सन्देश स्थापित गरेको छ । यी दुई दलमध्ये पनि मूल रुपमा उदाउँदो शक्तिशाली दलका रुपमा संघीय समाजवादी नै रहेको चुनावी नतिजाले देखाएको छ । किन भने मधेशलाई मात्र आधार मानेर राजनीति गर्ने क्षेत्रिय पार्टीमा उपेन्द्र... [ Read more → ]
काठमाडौं । सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको पदावधि सकिनै लाग्दा नयाँ मुख्यसचिव बन्न सरकारका वरिष्ठ सचिवहरू दौडधुपमा लाग्न थालेका छन् । मुख्यसचिव क्षत्री आगामी ७ कात्तिकमा ५८ वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश पाउदैछन् । दसैं तिहारको लामो बिदा पर्ने हुनाले उनले अब मुख्यसचिवका रूपमा काम गर्न जम्मा जम्मी १८ दिन मात्रै बाँकी छ । क्षत्री गत... [ Read more → ]
काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरण निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कांग्रेस प्रदेशसभा तथा संघीय संसद्का लागि निर्वाचन रणनीति बनाउन जुटेको छ । कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार नामावली असोज १७ भित्र छनोट गरी पठाउन जिल्ला तहलाई पत्राचार गरेको छ । अहिले कांग्रेस जिल्ला, क्षेत्रीय र गाँउ÷नगर समितिहरु उम्मेदवारका आंकाक्षीको नाम सिफरिसका लागि छलफल र बैठकमा... [ Read more → ]
काठमाडौं । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा जिल्लावासी र पार्टीको सल्लाह अनुसार नै उनी पदबाट राजीनामा दिने मनःस्थितिमा पुगेका बुझिएको छ । उनलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सरकारले भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । कोइराला सरकारले नियुक्त गरेको भन्दै त्यसपछि बनेको... [ Read more → ]
नेपालमा महिला पत्रकारका बराल
September 24, 2017 विविध
पत्रकारिता भन्नाले कुनै सूचना वा जानकारी एउटा स्रोतबाट लिई सञ्चार माध्यम मार्फत सर्वसाधारण समक्ष पु¥याउने कार्यलाई बुझिन्छ । १९५५ बाट नेपालमा पत्रकारिताको प्रारम्भ भए पनि २००७ सालको क्रान्तिमा महिला नेतृत्वको अहम, निर्णायक र उपलब्धिमूलक भूमिका रहे पश्चात नेपालमा महिला नेतृत्वहरुकै पहलमा वि.सं. २००८ सालबाट पहिलो महिला पत्रिका ‘महिला’ मासिक पत्रिका प्रकाशित भएको पाइन्छ । पत्रकारिता... [ Read more → ]
बी.पी कोइरालाले प्राप्त गरेका उपाधि
वि.सं २००० पछि विशेष गरी २००४ को ‘युगवाणी’ पत्रिकापछि आजसम्मका जुनसुकै पत्रपत्रिका पल्टाए पनि बी.पी.र्ला भेटिन्छ । प्रशंसा गर्ने, गाली गर्ने, राम्रो भन्ने नराम्रो भन्नेदेखि सबैखाले विचार यस्ता पत्रपत्रिकामा पाइन्छन् । पत्रपत्रिकाका अन्तर्वाता, लेख, समाचार आदि जेमा पनि बी.पी.लाई पाउन सकिन्छ । राजनीति र साहित्य दुई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा उत्तिकै ख्यातिप्राप्त बी.पी एउटा अथक साधना र... [ Read more → ]
ओम डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद निष्काशन
काठमाडौं । ओम डेभलपमेन्ट बैंकले चुक्ता पूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भएको छ। बैंकले भदौ २९ गतेसम्म कायम भएका शेयरधनीले १० कित्ता बराबर ३ कित्ताको दरमा हकप्रद खरिद गर्न पाउने छन् । बैंकले ४९ लाख ३१ हजार कित्ता हकप्रद असोज २३ देखि कार्तिक २६ गतेसम्म आवेदन खुला गरेको छ । बैंकको हकप्रद खरिदकालागि एनआर्इ्बिएल... [ Read more → ]
दसैंमा टेलिकमको सेवामा छुटैछुट
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले दसैंको उपलक्ष्यमा आफ्ना सेवाहरुमा छुट स्किम ल्याएको छ । रिचार्जमा बोनस जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइलमा रिचार्ज कार्डमार्फत रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत बोनस उपलब्ध हुने छ । स्किम असोज ५ गतेदेखि १० गतेसम्म लागू हुने छ । युट्युब डाटा प्याकेज जिएसएम प्रिपेड तथा पोष्टपेड मोबाइलमा युट्युब डाटा प्याकेज अन्तर्गत एक सय... [ Read more → ]
१० प्रतिशत नगद फिर्ता योजना
काठमाडौं । नेपालीहरुको चाडपर्वहरुलाई लक्षित गरी नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैंक लिमिटेड तथा यस बैंकका भिसा कार्ड संजालसँग आवद्ध रहेका बैंकहरुले संयुक्त रुपमा अन्तर्रा्िष्ट्रय कार्ड प्रदायक कम्पनी भिसासँग सहकार्य गरी आफ्नो भिसा कार्डका ग्राहकहरुलाई एटिएमबाट पैसा मात्र नझिकी सिधै बिक्री केन्द्रहरुमा कार्डबाट भुक्तानी गर्ने बानीको बिकास गराउने उद्देश्यले १० प्रतिशत नगद फिर्ता योजनाको घोषणा गरेको छ ।... [ Read more → ]
काठमाडौँ । राजनीतिको निकै उतार चढावपछि बहुप्रतिक्षित प्रदेश नम्बर दुईको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतपरिणाम आउने अन्तिम चरणमा छ । मधेशको मत परिणामले एउटा सन्देश Read More »
काठमाडौं । असोज २ को अन्तिम स्थानीय चुनावले मधेशमा तराई मधेशका मुख्य दलमा अब राजपा र संघीय समाजवादी नै रहेको सन्देश स्थापित गरेको छ । यी Read More »
काठमाडौं । सरकारका मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीको पदावधि सकिनै लाग्दा नयाँ मुख्यसचिव बन्न सरकारका वरिष्ठ सचिवहरू दौडधुपमा लाग्न थालेका छन् । मुख्यसचिव क्षत्री आगामी ७ कात्तिकमा ५८ Read More »
काठमाडौं । स्थानीय तहको तेस्रो चरण निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै कांग्रेस प्रदेशसभा तथा संघीय संसद्का लागि निर्वाचन रणनीति बनाउन जुटेको छ । कांग्रेसले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि Read More »
काठमाडौं । भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा जिल्लावासी र पार्टीको सल्लाह अनुसार नै उनी Read More »
© 2017 नयाँ विकल्प